अधुरो प्रेम बिर्सन सुशान्तले यति सम्म गरेका थिए, अंकिता लोखण्डेदेखि रिया चक्रबर्तीसम्म शुसान्तको प्रेम पलायो तर …… – Online Nepal
अधुरो प्रेम बिर्सन सुशान्तले यति सम्म गरेका थिए, अंकिता लोखण्डेदेखि रिया चक्रबर्तीसम्म शुसान्तको प्रेम पलायो तर ……
June 20, 2020 251
एजेन्सी । सौम्य मुस्कान चम्किलो फिल्म करियर, शुसान्त सिंह राजपुतको साथमा सबै कुरा थियो । यसको सबुतको रुपमा बिगतका दिनहरु छन् । जसमा उनको नाम धेरै अभिनेत्रीहरुसँग जोडियो । अंकिता लोखण्डेदेखि रिया चक्रबर्तीसम्म शुसान्तको प्रेम पलायो तर सबै अधुरो रह्यो ।
अंकितासँग टुट्यो ६ वर्ष पुरानो सम्बन्ध: सन् २००९ मा आएको टिलिसिररियल ‘पवित्रा रिश्ता’ पछि अंकिता र शुसान्तको सम्बन्ध चर्चामा आएको थियो । सन् २०१६ मा दुबैले ब्रे-कअप गरेका थिए । यसै क्रममा उनले आफ्नो पुरानो याद मेटाउनको लागि आफ्नो इन्स्ट्राग्राम अकाउन्ट डिलिट गरे । जसमा अंकितासँग बिताएका पलहरुको केही तस्बिरहरु थिए । अंकितालाई शुसान्तको निधनको खबर पुग्दा उनी निशब्द भएकी थिइन् ।
रिया चक्रबर्ती सेयर गरेकी थिइन अनसीन फोटो: शुसान्त राजपुतले सन् २०२० जनावरी २१ म आफ्नो ३४ औँ जन्मदिन मनाएका थिए । उनलाई विशेष शुभकामना ‘जलेबी’ की अभिनेत्री रिया चक्रबर्तीले दिएकी थिइन् । रियाले शुसान्तको साथमा रहेको अनसीन फोटो सेयर गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएकी थिइन् । तर उनीहरु दुबै जनाले आफ्नो प्रेम समबन्धको बारेमा केही पुष्टि गरेका थिएनन् । तर शुसान्तको म्यानेजरले बताए अनुसार उनीहरु बिगत एक वर्षदेखि प्रेममा थिए ।
तीन वर्ष अगाडी कृतिकासँग टाढिएका थिए: शुसान्तले केही व्यक्तिगत कारण देखाउदै कृतिका सेनसँग सन् २०१७ मा ब्रेकअप गरेका थिए । कृतिका एकदमै टिछो रिसाउने गर्छिन । त्यही कारण उनीहरुको बीचमा चिसोपन आएको थियो । उनीहरुले आफ्नो प्रेमको बारेमा लुकाउने धेरै कोशिस गरेका थिए ।
उनीहरुको प्रेम फिल्म ‘राब्ता’ को सुटिङको क्रममा बसेको थियो । कृतिकाको लागि शुसान्तले एक अन्तर्वातामा भनेका थिए–‘हामीबीचमा धेरै कुरा मिल्छ । हामी दुबै जना दिल्लीका हौँ । अर्को कुरा हामी दुबैको इन्जिनेरिङ व्याकग्राउन्ड छ । हामी चाहन्छौं । फिल्ममा आफ्नो अभिनय सतप्रतिशत गर्न सकियोस् । त्यसैले हामी नजिक भएका हौँ ।
साराको साथमा काम गर्न अस्वीकार गरेका थिए: फिल्म ‘केदारनाथड मा शुसान्तको विपरित रहेकी सारा अलि खानको नाम पनि चर्चामा रह्यो । त्यो समय उनीहरुको प्रेमसम्बन्धको खबर पनि मिडियामा धेरै आयो । तर उनीहरुले मिडियाको अगाडी नै प्रेम अस्वीकार गरे । शुसान्तले विज्ञापनमा साराको साथमा काम गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
Prevचार घण्टा चार्ज गरेपछि १२० किलोमिटर चल्ने कार बनाउँदै सरोज चेपाङ
Nextसुतेका बेलासमेत ‘मलाई न’मार्नुस्’ भन्दै चिच्याउँछन् रुकुम घटनाका घाइते
ईण्डियन आर्मीको जवानले होटलमा एक रात बिताएर श्रीमती बनाए, पाँच वर्ष पछि ‘आफ्नो बाटो लाग’ भनेपछि युवती रुँदै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
डेरावाल दिदी- ‘कहिलेकाहीँ त्यता साँघुरो भए सुत्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ’
पशुपतिमा भेटिए अनौठो करोडपति बाबा, अघोरी बाबाले गरे बाजा बजाएर बिहे (हेर्नुहोस भिडियो)
लकडाउन बढाउन सिफारिस, फेरि एक हप्ता थपिने
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60518)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50287)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44818)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44460)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43102)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41097)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37624)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35926)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28872)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27388)
फेसबुक ए’काउन्ट ह्या’क गरी अ’श्लिल फोटो हा’लिदिने भन्‍दै ठ’गी गर्ने दुईजना प’क्राउ
कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको अबस्थामा यि बिद्यार्थीले लेख्न छाडेर बनाए टिकटक
हर्षले सामाजिक सञ्जालमा राखे पहिलो पटक भारतीसंग रोमान्टिक तस्बिर, नराम्रो कमेन्ट गर्नेलाई दिए यस्तो रुखो जवाफ
बढ्यो सुनको मूल्य, आज तोलामा कति पुग्यो ?
देख्दा मात्र गुडलक हुने सालकको खपेटा सहित ३ जना पक्राउ, कतिमा बिक्रि हुन्छ सालकको खपेटा ?
© Copyright 2016–2020 Online Nepal. All rights reserved.